Isikhungo Sokuhlola se-Ultrasonic inqubo - Hielscher Ultrasound Technology
Umphumela we-ultrasonication ezintweni ezehlukene zingahlolwa kalula. I-Hielscher Ultrasonics ikunikeza inqubo yayo ye-ultrasound, ifakwe ngokugcwele namadivaysi e-ultrasonic, inqubo yezinsiza kanye nemishini yokuhlaziya, ukuze kuhlolwe ukufaneleka nokucubungula uhlelo lwakho lokusebenza. Sinikeza isevisi yokuhlolwa okusemandleni nokusebenza kwenqubo ukuqinisekisa ukuthengiswa okusheshayo, kwezomnotho nokuhloswe kwezicelo zakho ze-ultrasonic. Abasebenzi bethu abaqeqeshiwe nabaqeqeshiwe bajabula ukukusiza ngenqubo yakho!
Uma ungathanda ukuveza izinto ezithile kwi-ultrasonication futhi uhlaziye umphumela, ungakwazi ukuthenga idivayisi ye-ultrasonic ye-laboratory yakho, noma ungasebenzisa i-process lab yethu. Ngethu zitshala eTeltow, eJalimane, sikunikeza i-laboratory ehlome uhla lwezinto ezihlukahlukene zokuhlola nokwenza ngcono izinqubo ezihlukahlukene ze-ultrasonic. Lokhu kufaka konke okukhona Amadivayisi we-Ultrasonic Laboratory futhi amadivaysi ezimboni, amaphampu, amathangi, izilawuli, kanye nemishini yokuhlaziya. Yiqiniso, ilabhu yethu ifakwe izilinganiso ezinembile, i-centrifuge, i-glassware kanye ne-solvents kanye nezigqoko kanye namagilavu, amajaji ama-lab. Umphathi wethu we-lab owake wahlala isikhathi eside futhi osebenza ngamakhemikhali wethu usiza ekuhlolweni kwezinqubo nasekuhlaziyweni.
Bhala indlela yethu Yokusebenza Lab!
Usuku lwe-1/2 Okungenani. I-Lab Isikhathi
(4hrs) ukusetshenziswa kwelabhutrikhi
Usuku olungu-1 Lokungenani. I-Lab Isikhathi
(8hrs) ukusetshenziswa kwelabhutrikhi
Izinsuku ezingu-2 Okungenani. I-Lab Isikhathi
(2x8hrs) i-laboratory ukusetshenziswa
Izinsuku ezingu-3 Okungenani. I-Lab Isikhathi
(3x8hrs) i-laboratory ukusetshenziswa
Izinsuku ezingu-4. I-Lab Isikhathi
(4x8hrs) yokusetshenziswa kwelabhutri
Iviki elingu-1. I-Lab Isikhathi
(5x8hrs) yokusetshenziswa kwelabhutrikhi
kuze kufike ku-10mL yokuhlola ivolumu
I-10mL kuya ku-100mL yokuhlola ivolumu
I-100mL kuya ku-1000mL yokuhlola ivolumu
I-1L kuya ku-10L Ivolumu Yokuhlola
10L kuya ku-100L Ivolumu Yokuhlola
I-VolumeL yokuhlola engu-100L
Ekusebenzeni kwethu lebhu, sinikeza amadivaysi okwenziwa kwe-sonication yemithamo yamanzi kusuka ku-0.1mL kuya ku-approx, 1000 amalitha ngehora. Izinsiza zefriji eline-inline noma ukushisa kwento yokucubungula iyatholakala ukulawula ukushisa kwe-sonication. Ukucindezelwa kwengane kungakhuphuka kuya ku-approx. I-bar engu-30. Amapompo ethu angakwazi ukuphatha ama-viscosity aphezulu, izinto eziphakeme zokugxilisa izinyosi ezingeni eliguquguqukayo.
Ukuze ulungiselele izinto zakho zokuhlola, sinezinto ezidingekayo ezidingekayo njengabaxube, abaqhubi, abafudumele, ama-microwave njll.
Ukuhlaziywa nokuhlolwa kwekhwalithi nokusebenza kwenqubo ye-ultrasonic yingxenye ebalulekile yokuvakasha kwakho ohlelweni lwethu lomsebenzi. Ukuhlaziywa kwe-post-sonication kukukhombisa ukuthi izimpendulo ezibonakalayo ku-ultrasonics futhi kwembula ukuthi imingcele ye-sonication inikeza imiphumela engcono kakhulu. Ibhokisi elingezansi likukhombisa ithuluzi elibaluleke kakhulu lokuhlaziya, esinikeza kulobhu yethu yokusebenza.
Isevisi yethu ihlanganisa umbiko ophelele webhu ohlanganisa yonke imigomo ye-ultrasonic nemilinganiselo yokuhlaziya. Izithombe, izithombe namatafula ukubona ngeso lengqondo umsebenzi owenziwe ngesikhathi sesevisi yebhu ebhaliswe esibhedlela sethu se-ultrasonic lobuchwepheshe. Umbiko we-lab eningiliziwe ukwenza ukwazi ukukhiqiza yonke imiphumela.
Okuhlangenwe nakho kwethu – Inzuzo yakho!
U-Hielscher ungumphakeli oholayo wamadivayisi we-ultrasonic for processing ultrasonic liquid. Amadivaysi ethu e-ultrasonic asetshenziswa ezinhlobonhlobo zezimboni, njenge Ukudla & Isisindo, amakhemikhali avuselelwe, Ama-nanomaterials, Inkinobho & Inkjet. I-Hielscher inokuhlangenwe nakho okubanzi ekuvivinyeni okusemandleni, ukuthuthukisa nokwenyuka kwezinqubo.
Amadivaysi e-Analytical and Methods
I-laboratory ye-Hielscher ye-laboratory ayinakho kuphela imishini ye-ultrasonic yakamuva, sikunikeza izindlela eziningi zokuhlaziya ukuhlola imiphumela yokucutshungulwa kwe-sonication, futhi.
I-particle Size Characterzation
I-Microtrac S3500 (i-Microtrac)
I-Laser Diffraction: I-Microtrac S3500 isebenzisa ubuchwepheshe be-Tri-laser obunikazi obunikazi bokuhlinzeka ngolwazi olunembile noluthembekile lwezinhlayiyana zezinhlayiya. Ngisho nasezingeni eliphansi le-micron, izilinganiso zenziwa ngaphandle kokuhluka kwesampula-kwesampula okubonakalayo kwezinye izinhlelo eziningi. Ngokukhulisa inani lemithombo elula, ubuchwepheshe obuhlukile be-Tri-laser busebenzisa ngokuphumelelayo amadivaysi okubona izithombe, ngenkathi kugcinwa ukuqina okuphezulu nokulungiswa kwesistimu yokukhanya. I-Microtrac S3500 iyavumelana noma idlula ISO 13320-1 I-Particle Size Analysis- Izindlela Zokuhlukanisa Laser.
I-Microtrac S3500 ifanele ukulinganisa usayizi wezinhlayiyana kusuka ku-21,5 nm kuya ku-1408 μm
I-Nano-flex® (i-Particle Metrix)
Ukusakaza Ukukhanya Kwemvelo: I-Nano-flex ihlukanisa izinhlelo ze-colloidal ngokuhlakazeka okukhanya okunamandla ngaphakathi kobukhulu besayizi ka-0.3 nm kuya ku-10 μm futhi kufanelekile izinhlelo ezibonakalayo ngokugxila kusuka kuma-ppm kuya ku-40% vol., Kuye ngokuthi uhlobo lwezinto ezibonakalayo. Ivolumu encane yezinyathelo i-droplet engu-1.
I-Nano-flex isifanele ukulinganisa ubukhulu bezinhlayiyana kusuka ku-0.3 nm kuya ku-6.5 μm.
isikali eM micron, NS (Hegman) nasePCU
100 – 0 μm, 0 – 8 H, 0 – I-PCU engu-10
50 – 0 μm, 4 – 8 H, 5 – I-PCU engu-10
15 – 0 μm, 6.8 – 8 H, 8,5 – I-PCU engu-10
Uhlelo lwe-ultrasonic sieve lokuhlaziywa kwesihlungi izikrini ngokusho kwe-DIN / ISO 3310/1 (isikrini seRetsch sokuhlaziya)
Ubukhulu be-Mesh: 1000, 710, 500, 300, 200, 150, 100, 63 μm
I-microscopy ebonakalayo ebonakalayo enezinhloso 4x, 10x, 40x (Bresser, Carl Zeiss Jena)
I-microscopy yokukhanya ehambayo enezinhloso 4x, 10x, 40x, 100x (Immersion objectiv)
Ukuzimisela ubukhulu ngezinga eliphansi le-micron
Ukuzimisela kwama-indices wokubamba, ukuhlushwa kwezinkinga zeshukela, nokucindezeleka okuhambisanayo kweziphuzo
I-refractometer ephathekayo 0 – I-90 ° Brix (uMüller Optronic)
I-refractometer ephathekayo 0 – 10 ° uBrix (Greiner Glasinstrumente)
Rheometer Rotational RheolabQC (Anton Paar)
ngokucwiliswa kwe-cylinder CC39 ye-viscosity ukuzimisela kusuka ku-1 kuya ku-104 mPas
Ukuzimisela kwe-viscosities eguquguqukayo neyinkimbinkimbi, amaphuphu okugeleza, iphuzu lokukhiqiza njll.
I-Bostwick Consistometer (i-CSC Scientific)
Ukuzimisela kwezici zokugeleza kwezimpukane ezinama-viscous kakhulu
Ukucwiliswa kwezinkomishi ze-viscosity ngokusho kwe-DIN 53211 (i-opti-color)
ngenxa yokuzimisela okusheshayo kwe-visemicity kinematic ye-middle to low viscosity fluids
ama-diameter ama-diameter: 3, 4, 6 no-8 mm
ngokuzimisela kokusabalalisa kanye nokuqukethwe kwe-emulsion nokuqukethwe kwezinhlayiyana
I-Table Centrifuge ye-80-2 ngesivinini sokujikeleza sika-2000 no-4000 (T%)
I-pH yemitha ye-pH ye-pH 0 – 14; ukunemba pH 0.01 (HANNA® Instruments)
Iphepha lokubonisa pH 1 – 14
Vula imbiza yebell ukuze i-degassing yotshwala
ngenxa ye-degassing of fluids kanye nokuhlolwa kokusebenza kahle kwe-ultrasonics
Ukuhlaziya okuqhubekayo nezindlela zokuhlola
Ukunqunywa kwe-hydrophobicity nge-methanol test wttability test, contact contact angle
Ukuthola okufanelekayo kwamaprotheni (imvula)
Ukuthola okufanelekayo kwamafutha (ukusabela kokuthola amafutha)
Ukuthola okufanelekayo kokunciphisa ushukela kanye ne-glycerol (ukuhlolwa kukaBenedict, ukuhlolwa kukaHaine)
I-Quantification yama-fatty acids mahhala kumafutha namafutha (i-asidi-base titration ukucacisa inani le-asidi)
I-Quantification ye-glucose (ama-test strips)
Ukunqunywa kobunzima bamanzi
Ukulinganisa ukusebenza, ukucwiliswa kwezidakamizwa, ukomisa, ukuhlunga, ukulinganisa